သားသမီးကို ရိုငျးစခေငျြတဲ့ မိဘရယျလို့ ဘယျရှိပါ့မလဲ - Celegroup
HomeKnowledgeသားသမီးကို ရိုငျးစခေငျြတဲ့ မိဘရယျလို့ ဘယျရှိပါ့မလဲ
သားသမီးကို ရိုငျးစခေငျြတဲ့ မိဘရယျလို့ ဘယျရှိပါ့မလဲ
ကိုယျ့သားသမီးကို ရိုငျးစခေငျြတဲ့ မိဘ ရယျလို့ ဘယျရှိပါ့မလဲ?ကိုယျကမိဘ အုပျထိနျးသူတဈယောကျဆိုရငျ ကိုယျ့သားသမီးကို ယဉျကြေး လိမ်မာ စခေငျြကွမှာ ဓမ်မတာပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ လောက မှာ ဖွဈခငျြတဲ့အရာတိုငျးက လှယျလှယျကူကူလေးဖွဈလာတာမဟုတျတဲ့အတှကျ မဖွဈလာတဲ့အခါလညျး စိတျအရမျးပူမသှားပဲ ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလို လေးတှမြေား ထိနျးကြောငျးသငျပွ ပေးမယျဆိုရငျ အဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာ ကို ထပျပွီးကွိုးစားကွညျ့ဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
ဒီအရှယျဟာ ပြျောစရာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့အခြိနျကောငျးပါ။ ဒီလိုအခြိနျမှာမှ လောကကွီးရဲ့အနှဈသာရကိုအပွညျ့အ၀မခံစားရငျ သိပျနှမွောဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့ပြျောရှငျမှုတှကေိုမပိတျပငျပဲ အတိုငျးတာတဈခုထိလှတျထားပေးသငျ့ပါတယျ။
အကောငျးမွငျတတျတဲ့စိတျလေးကို ဆယျကြျောသကျအရှယျထဲကနတေဖွညျးဖွညျးသငျပေးပါ။ တဈဘ၀လုံးအတှကျ စိတျခမျြးသာဖို့အကောငျးမွငျတတျတဲ့စိတျလေးလညျးရှိဖို့လိုပါတယျ။
ဒီအရှယျမှာ အရှိသငျ့ဆုံးကတော့တငျးတိမျရောငျ့ရဲနိုငျတဲ့ စိတျထားလေးပါပဲ…ဆိုလိုခငျြတာက တဈခြို့သော ဆယျကြျောသကျလေးတှဟော ဒီလိုမနူးမနပျအရှယျမှာ စိတျထှပွေီး အရမျးကိုသူမြားထကျသာခငျြတာမြိုး၊ လောဘကွီးတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကိုယျ့ရဲ့လကျရှိမိသားစုအခွနေကေိုနားလညျပွီးမလိုအပျတဲ့နရောတှမှောမလိုလောဘမကွီးဖို့ထိနျးပေးသငျ့ပါတယျ။
4. ဝမျးနညျးပါစေ၊ ကွာကွာစိတျဓာတျမကတြတျအောငျသငျပေးဖို့လိုပါတယျ
စိတျပငျပနျးမှုတှရှေိလာတဲ့ဝမျးနညျးရငျဝမျးနညျးပါစေ လှတျထားလိုကျပါ၊ အခြိနျတိုငျးတာတဈခုမှာတော့ပွနျထနိုငျတဲ့စိတျဓာတျမြိုးဖွဈအောငျ သငျကွားထားပေးပါ။
ဆယျကြျောသကျအရှယျဆိုတာဘ၀ရဲ့စလို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ကွိုးစားခငျြစိတျရှိလာအောငျ နှိုးဆှပေးသငျ့ပါတယျ။
Credit -Trend myanmar
ကိုယ့်သားသမီးကို ရိုင်းစေချင်တဲ့ မိဘ ရယ်လို့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ?ကိုယ်ကမိဘ အုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးကို ယဉ်ကျေး လိမ္မာ စေချင်ကြမှာ ဓမ္မတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် လောက မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းက လွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက် မဖြစ်လာတဲ့အခါလည်း စိတ်အရမ်းပူမသွားပဲ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လို လေးတွေများ ထိန်းကျောင်းသင်ပြ ပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ ကို ထပ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်ဟာ ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်ကောင်းပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာမှ လောကကြီးရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အ၀မခံစားရင် သိပ်နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမပိတ်ပင်ပဲ အတိုင်းတာတစ်ခုထိလွှတ်ထားပေးသင့်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထဲကနေတဖြည်းဖြည်းသင်ပေးပါ။ တစ်ဘ၀လုံးအတွက် စိတ်ချမ်းသာဖို့အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ အရှိသင့်ဆုံးကတော့တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့ စိတ်ထားလေးပါပဲ…ဆိုလိုချင်တာက တစ်ချို့သော ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ ဒီလိုမနူးမနပ်အရွယ်မှာ စိတ်ထွေပြီး အရမ်းကိုသူများထက်သာချင်တာမျိုး၊ လောဘကြီးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိမိသားစုအခြေနေကိုနားလည်ပြီးမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမလိုလောဘမကြီးဖို့ထိန်းပေးသင့်ပါတယ်။
4. ဝမ်းနည်းပါစေ၊ ကြာကြာစိတ်ဓာတ်မကျတတ်အောင်သင်ပေးဖို့လိုပါတယ်
စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိလာတဲ့ဝမ်းနည်းရင်ဝမ်းနည်းပါစေ လွှတ်ထားလိုက်ပါ၊ အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ပြန်ထနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင် သင်ကြားထားပေးပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာဘ၀ရဲ့စလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိလာအောင် နှိုးဆွပေးသင့်ပါတယ်။
ငှကွေေး လှူဒါနျးနိုငျမှ ကုသိုလျမညျတာမဟုတျပါ